Qeerroon Maal Jedha? « QEERROO
Dhalooti Oromoo guyyaa mirgi abbaa biyyumaa isaanii irraa mulqamee eegalee, diddaa inni yeroo adda addaan taasisu jabaataa deemuun isaa seenaan nu yaadachiisa. Qabsoo bilisummaaf godhamu kana keessatti hirmaannaan barattoota Oromoo bara 1970 eegale, gara humana jabaatti jijjiramuun Jaarmiyaa siayaasaa guddaa uummata Oromoo biratti kabajamaafi jaalatamaa ABO gad dhaabuun qabsoo hidhannoo finiinsuutti seene. Jaarmiyaan siyaasaa kun dhibbaan dhibbatti milkaahuu baatus bu’aalee gurguddaa ijaan argamanis tahe kan hin argamne saba isaaf gumaachee jira. San keesssa tokko dhaloota amma jiru, kan eenyummaa isaa irratti dammaqe, an diinaaf hin bitamu jedhu; Dhaloota fincilaa dhalchee dabre.
Anis waan haaraa barreessuuf odoo hin taane, akka barataa Oromoo tokkootti shoorri barattonni Oromoo Fincila diddaa gabrummaa bara 2000 irraa eegalee keessatti taphatan wal yaadachiisuun dirqama taatee natti mul’atte jennaan qalama koo ol qabe. Fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo taasisan san keessatti qooda fudhadhee dabruun koo akka an obboleeyyan Oromoo waliin barnootaaf manaa bane, warreen Oromummaaf jecha wareegaman, kan qaamni irraa hir’ate kan hidhaatti dabramee fi kan bakka isaan jiran hin beekamnetu sammuu keessaa na belbelee boqonnaa na dhorke.
Sochii gootonni barattoonni Oromoo qabsoo bilisummaa saba isaaniif taasisan bara 2000 irraa eegalee golee Oromiyaa mara keessatti akka malee finiinuun diina meeshaa waraanaa hidhate waliin hudhee wal qabe. Kana keessatti guyyaa Fincilla diddaa gabrummaa Saadasa 09/2005 Uummata Oromoof waamicha godhame keessatti hirmaannaan baratoota Oromoo akkam ture ? Wareegamuufi qaamaa hir’achuu gootota baratoota Oromoo meeqan keenyatu quba qaba? Meeqan keenyatu yaadata?
Seenaa Qabsoo Barattoota Oromoo: //www.youtube.com/watch?v=AHG90sf_kAw&feature=player_embedded]
Bakka jirru maraa waan bilisummaa saba keenyaaf ta’u irratti haa dalagnu!!
Seenaan haaraa wareegama Qeerroottin ni dalagama!